Abavelisi beNkqubo yeDrawer kunye nababoneleli - iNkqubo yeDrowa yaseChina
Ukuvalwa okuThambileyo kweSlim iSilayidi yeSilayidi
Intshayelelo:Ukuvalwa okutyibilikayo okubhityileyo kodonga lwesilayidi esidla ngokusetyenziswa rhoqo ekhitshini nakwikhabhathi yangasese. Olu hlobo lokuvalwa okuthambileyo slim kabini eludongeni ukusetyenziswa kwesilayidi lusebenzise ukuhla kwesilayidi ngegiye. Inqaku lelilayidi ezisebenza zithe cwaka kwaye zilungelelanise ulwandiso olupheleleyo ngaphandle kwengxolo. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M04.86
Ukuphakama kwesilayidi esine-150mm slid sliding ekhitshini
Intshayelelo:Ukuphakama okuyi-150mm kwisilayidi esityibilikayo iidrowa zekhitshi zihlala zisebenzisa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokuvalwa okuthambileyo slim kabini eludongeni ukusetyenziswa kwesilayidi lusebenzise ukuhla kwesilayidi ngegiye. Inqaku lelilayidi ezisebenza zithe cwaka kwaye zilungelelanise ulwandiso olupheleleyo ngaphandle kwengxolo. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M04.150
Ukuphakama okungama-182mm okuthambileyo okufutshane ebhokisini yebhokisi yekhabhathi yetsimbi
Intshayelelo:I-182mm ukuphakama kwebhokisi encinci esondeleyo ebhokisini yekhitshi yedrowa yesinyithi ihlala isebenzisa ekhitshini nakwikhabhathi yokuhlambela. Olu hlobo lokuvalwa okuthambileyo slim kabini eludongeni ukusetyenziswa kwesilayidi lusebenzise ukuhla kwesilayidi ngegiye. Inqaku lelilayidi ezisebenza zithe cwaka kwaye zilungelelanise ulwandiso olupheleleyo ngaphandle kwengxolo. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M04.182
Inkqubo yebhodi yesinyithi ye-118mm yesilayidi eslidayo
Intshayelelo:Inkqubo yebhokisi yesinyithi ye-118mm yesilayidi esityibilikayo ihlala isetyenziselwa iikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lokuvalwa okuthambileyo slim kabini eludongeni ukusetyenziswa kwesilayidi lusebenzise ukuhla kwesilayidi ngegiye. Inqaku lelilayidi ezisebenza zithe cwaka kwaye zilungelelanise ulwandiso olupheleleyo ngaphandle kwengxolo. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M04.118
Inkqubo yokuhamba okusondeleyo ethe cwaka kwisilayidi sedreyini esisebenza kabini
Intshayelelo:Inkqubo yokuhamba ngokusondeleyo ethe cwaka kwisilayidi sedonga esisebenza kabini ekhitshini nakwiikhabhathi zangasese. Olu hlobo lwesilayidi esisebenzisa udonga lwesilayidi olufihliweyo imbaleki enegiya. Inqaku lelilayidi ezisebenza zithe cwaka kwaye zilungelelanise ulwandiso olupheleleyo ngaphandle kwengxolo. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M01.199
Inkqubo yebhokisi yedrawer yeedrawer zentsimbi kunye nokuhamba okuthe cwaka
Intshayelelo:Inkqubo yebhokisi yedrawer yeedrawer zentsimbi kunye nokuthula okuthe tye ngaphandle kokusebenzisa ikhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lwekhitshi yesinyithi ibhokisi yezilayidi zisebenzisa isilayidi esisezantsi sedrowa enegiya. Inqaku lelilayidi ezisebenza zithe cwaka kwaye zilungelelanise ulwandiso olupheleleyo ngaphandle kwengxolo. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M01.86
Inkqubo yeDraw Metal Sliding Drawer
Intshayelelo:Inkqubo yokutshixa yentsimbi kabini eludongeni ihlala isetyenziselwa iikhitshi kunye nekhabhathi yokuhlambela Olu hlobo lwekhitshi yesinyithi ibhokisi yezilayidi zisebenzisa isilayidi esisezantsi sedrowa enegiya. Inqaku lelilayidi ezisebenza zithe cwaka kwaye zilungelelanise ulwandiso olupheleleyo ngaphandle kwengxolo. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Inkqubo yeDraw yeBhokisi eNcinci
Intshayelelo:Inkqubo yedrowa yebhokisi encinci yedonga esetyenziselwa ukusetyenziswa kwekhitshi kunye neekhabhathi zangasese. Olu hlobo lwenkqubo yedrowa yebhokisi encinci usebenzisa ukuthula okuvaliweyo kufutshane nokuhla kwesilayidi esinezixhobo zokutshixa. Kananjalo unokutshintsha ukusebenzisa i-Push ukuvula isilayidi esifihliweyo kunye neeklip zangaphambili. Inqaku lale mveliso kukuwehlisela isilayidi ngaphandle kokusebenzisa idrowa yesinyithi kunye nedrowa yomthi. Ngaba unokugcina iindleko zoluhlu lwakho. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M02.89
Inkqubo yokuTsala okuThobileyo okuThuleyo
Intshayelelo:Silent inkqubo yokuvalwa ethambileyo idla ngokusetyenziswa ekhitshini nakwikhabhathi yangasese. Olu hlobo lwesixokelelwano esithuleyo sedrowa yokuvala lusebenzisa isitayile esithe cwaka esivaliweyo sokuhla kwesilayidi esinezixhobo zokutshixa. Kananjalo unokutshintsha ukusebenzisa i-Push ukuvula isilayidi esifihliweyo kunye neeklip zangaphambili. Inqaku lale mveliso kukuwehlisela isilayidi ngaphandle kokusebenzisa idrowa yesinyithi kunye nedrowa yomthi. Ngaba unokugcina iindleko zoluhlu lwakho. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M02.185
Ibhokisi yeZilayidi eziTyhidiweyo zeSlim
Intshayelelo:Ibhokisi yesilayidi esityibilikisiweyo esinyithiweyo zihlala zisetyenziselwa iikhitshi kunye nekhabhathi yokuhlamba Olu hlobo lwesilayidi ebhokisini yesinyithi esitshixwayo sisebenzisa isilayidi esithe cwaka esivaliweyo esijongela phantsi isilayidi esinezixhobo zokutshixa. Kananjalo unokutshintsha ukusebenzisa i-Push ukuvula isilayidi esifihliweyo kunye neeklip zangaphambili. Inqaku lale mveliso kukuwehlisela isilayidi ngaphandle kokusebenzisa idrowa yesinyithi kunye nedrowa yomthi. Ngaba unokugcina iindleko zoluhlu lwakho. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yedrowa yebhokisi encinci, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Umzekelo No .: M02.121